လက်ခံသူကုဒ်မှပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်မည်။ - TrueMoney Transfer
TrueMoney ဝေါလပ် ဒေါင်းလုပ်မယ်
ကမ်းပိန်းအမည် : လက်ခံသူကုဒ်မှပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်မည်။
ကမ်းပိန်းကာလ : အောက်တိုဘာ ၁၅၊ မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ၂၀၂၁။
လက်ခံသူသည်ရရှိသောကုဒ်အားထိုင်းနိုင်ငံရှိငွေပေးပို့သူအားအကြောင်းကြားပြီးTrueMoney ဝေါလပ်အပလီကေးရှင်းမှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေလွှဲရန် တောင်းဆိုပါ။
ပေးပို့သူသည် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဆုရယူရန်အတွက်ရရှိသည့်ကုဒ် (ပြန်အမ်းငွေ 50 ဘတ်) ကိုဖြည့်ရန် TrueMoney Transfer ဝန်ထမ်းဆီသို့ m.me/truemoneytransfermyanmar မှဆက်သွယ်ပါ။
ထရူးမန်းနီးအပလီကေးရှင်းမှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ငွေလွှဲပေးပို့မှုအောင်မြင်ခဲ့လျင်ပေးပို့သူသည်ကမ်းပိန်းကာလအတွင်းတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊အများဆုံး၃လဆက်တိုက်ဆုလက်ခံရရှိမည်။ ကမ်ပိန်းကာလတစ်လျှောက်တွင်ပေးပိုသူတဦးလျှင်စုစုပေါင်းဘတ် ၁၅၀။
အနည်းဆုံလွှဲရမည့်ပမာဏသည်တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅၀၀ ဘတ်ဖြစ်သည်။
ကမ်ပိန်းကို True Money Company Limited (“ ကုမ္ပဏီ”) မှစီစဉ်သည်။
ဆု(၅၀ဘတ်)ကိုပေးပို့သူ၏TrueMoneyဝေါလပ်အကောင့်ထဲသို့ငွေအောင်မြင်စွာလွှဲပြောင်း ပြီးဖြည့်သွင်းသည့်နေ့မှ ၇ ရက်အတွင်းဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်သူသည်မသမာသောကိစ္စ၊အမှား၊ဤစည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်ထိုပါဝင်သူသည်ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်ဆုလက်ခံခြင်းမရှိကြောင်းသက်သေပြသည့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကုမ္ပဏီကအကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲဆုလက်ခံရယူခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 1240 လိုင်းခွဲ4သို့ ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့်စကားပြောလိုပါက m.me/truemoneytransfermyanmar
အောက်တိုဘာလ15 မှ ဒီဇင်ဘာလ 31 2021 အထိ
လစဉ် ၅၀ ဘတ်ရရန်မည်သူကအရည်အချင်းပြည့်မီသနည်း။
လစဉ် ပြန်လည်ရရှိငွေ 50 ဘတ်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ?
အနည်းဆုံးတကြိမ်လျင် ၁၅၀၀ ဘတ်ငွေလွှဲပို့ရမည်။တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊ အများဆုံး ၃ လဆက်တိုက်
2. “ TrueMoney Transfer Myanmar” Facebookမှ တဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အားဆက်သွယ်ပါ။
4. WebLink တွင်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ (ဝန်ထမ်းများ FB Messenger မှတဆင့်ပေးလိမ့်မည်)
ထိုင်းဘတ်ငွေ ၅၀ ပြန်မရလျှင်ဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ
ဖုန်း1240 လိုင်းခွဲ4သို့မဟုတ် FB messenger ကိုဆက်သွယ်ပါ။
1. အဆင့် ၁။ အပ်ပလီကေးရှင်းထဲဝင်ပြီး “မြန်မာပြည်သို့ ငွေလွှဲ” ကိုနှိပ်ပါ။
2. အဆင့် ၂။ စည်းကမ်းချက် အခြေအနေများ “လက်ခံခြင်း”ကိုနှိပ်ပါ။
3. အဆင့် ၃။ ငွေမဖြည့်ရသေးလျှင် “ပိုက်ဆံသွင်းမည်” ကိုနှိပ်ပါ၊ ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်လျှင် “နောက်မှပြုလုပ်မည်” ကိုနှိပ်ပါ
4. အဆင့် ၄။ လွှဲမည့်နိုင်ငံ “မြန်မာ” ကို ရွေးပါ။
5. အဆင့် ၅။ မြန်မာပြည်ဖက်မှ ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရန် အကွက်ကို နှိပ်ပါ။
6. အဆင့် ၆။ ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပါ။
7. အဆင့် ၇။ မိမိလွှဲလိုသည့် ပမာဏအား ထည့်ပြီးလျှင် “ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်” ကိုနှိပ်ပါ။
8. အဆင့် ၈။ လုပ်ဆောင်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီးလျှင် “ပေးချေမည်” ကိုနှိပ်ပါ။
9. အဆင့် ၉။ ငွေလွှဲမှု အောင်မြင်ပါပြီ။ ငွေလွှဲဖြတ်ပိုင်းအား သင့်ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းစည်းထားပြီးဖြစ်သည်။
10. အဆင့် ၁၀: ဖောင်တွင်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါ